China Ikuku windo jaketị ndị na-emepụta windo | Na-ada
Nkebi: Jaketị ndị na-enweghị windo
（I nwekwara ike hazie agba ịchọrọ）
Ndi mmadu anaghi echegbu onwe ha banyere okpomoku ma obu uzo ejiji? You gaa ahịa, ị gaghị eyi obere uwe. Uwe ala nke agba na ụdị dị iche iche bụ n'ezie ọrụ ndu nke ejiji iji guzogide oyi dị ugbu a. Ma jaketị dị ntakịrị gbadara agbada na-eme ka ahụ nke ndị na-ewu ewu mikpuo na akwa jaket mara mma, nke na-abụghị nke ejiji ma ọlị. Kedu ụdị ngwakọta uwe ụmụ nwoke nwere ike iwepụ mmetụta dị nro ma mee ka ụmụ nwoke kwụrụ ọtọ? N'ezie, ọ bụrụhaala na ị mụtara otu esi agwakọta, ị nwere ike idozi nsogbu nke mkpokọta uwe ụmụ nwoke n'oge oyi.
Oge oyi nke jaket a bụ ihe ọhụrụ karịa mgbe ọ bụla. Hapụ ụdị edozi na agba mgbochi gara aga, ihe kachasị mkpa bụ imebi echiche ebumpụta ụwa nke iwe, ma tinye n'ime ihe ndị na-ewu ewu ugbu a. A na-ejikọ jaket ndị a niile na ejiji na ọsọ ọsọ zuru oke, na -emepụta mpempe akwụkwọ ejiji na-eme ka ị maa mma karịa nke ndị ọzọ n'oge oyi. Lelee ọkụ, nro, ikuku na-egbu ikuku na ume na-enwu enwu dị n'elu. Na mgbakwunye, ịkpụ akụkụ nke akụkụ atọ nwere echiche nke imepụta ihe jikọtara ya na ụdị ezumike dị iche iche. Na mfe n'ime ejiji ọcha, nwere ike mgbe niile-eme ka monotonous ala jaket ọzọ àgwà.
Ọ bụrụ na ụmụ nwoke ahọrọ jaket ala, ọ bụrụ na ha achọghị ka anya ha dị ọcha, mgbe ị na-ahọrọ jaket dị ogologo ma ọ bụ nke dị mkpirikpi, attentionaa ntị na ịhọrọ ịkwa akwa nke nwere mmetụta nke ịdị gịrịgịrị ma wulite echiche nke ejiji. Black ka bụ agba dị gịrịgịrị. Ọ bụrụ n’ịchọghị ịdị dull, ị nwere ike itinye ụfọdụ ihe na-awụlikwa elu na ịchafụ, okpu na akpa.
Nke gara aga: Uwe elu nke ndị inyom na-agbada